Maanta ishii wax arkiweydaaye ha baqdo. | Jamaame News Network
Muddo dhan 25 sano , ayuu dalka Soomaaliya burbur ku jirey, yaase ka dambeeyey, leysma weydiin, haddii ay dhacdayna, waxaa had iyo jeer loo saariyaa, marba meel, runtuse, waa mid ay soomaalidu iska indha tirto, taasi oo loo sababeen karo, daciifnimo xagga nafta ah, oo awooddeedana yeesheen kuwa dadka ku hor yimid inay daacad u yihiin.
Hase yeeshee intii maamul soo qabtey tan iyo 25kaa sano , bal aan dib u dhuuxno, oo runta aan isu sheegno, haddii la doonaayo Soomaalinimo, haddiise la doonaayo inuu dalkaani fara ka baxo, dadkiisana noqdaan kuwa dulleysan, oo dhamaad u dambeyso aan sidaan ku soconno.
Haddiise Soomaalinimadu dhab ka tahay umaddaani , intooda toosan waa inay dib u fiiriyaan, ayaga oo ka xuroobaayo jaahilnimo, iyo sifooyinka jaahilnimada, ayna u horreyso qabyaaladda iyo meel heblaan u dhashey amase aan degganahay, taasi oo haddii aan laga xuroobin, aysan dhicidoonin in la helo meel la sheegto, meel la dego iskaba daayee.
Dalkaani maalintii xurriyadda la qaatey ilaa maanta , yaa soo maamulaayey, qoraal ceenkaan oo kale horey ayaan u soo gudbiyey, marar bandanna waxaan ku hadaaqey, Soomaalidu waa inay ka xurowdaa dullinimada ay dooneyso inay ku socoto, sidii ay u burburto, hase yeeshee wax iga hoos qaadey ma laha.
Haddaba dalkaani waxaa sidaani u galey oo maantana kusoo wodo, kuwa aan ka maarmin, qabyaalad , isla markaana aan wax isku tarin, oo qoda noqdey dhiig miirato, daneystayaal, iyo kuwa dalka iyo dadkaba iibiyaahe.
Runtu markaan usoo dhaadhaco, dalkaani waxaa burburiyey, heebta Daarood haba qaar gaar ha u ahaatee, oo magacaasi mar walbo ku awr kacsada , isla markaana ku daneysta, halka Daaroodka qaarkii aysan nolol haaysan dalka gudahiisa, iyo debeddiisaba.
Waxaa kale oo burburiyey heebta Hawiye, haba ku daneystaane , kuwa gaar ah, kuna awr kacsada, halka Hawiye intiisa badan maanta ay dalka gudahiisa iyo debeddiisaba ku woda liitaan, magacoodana lagu woda cayaarey, ayna dheef ku haysan.
Haddaba dalkaani ma keli labadaa beelood ayuu ka koobanyahay, mise, dalku waa dal mideeya, magaca Soomaaliya, hadduu dalka yahay mid Soomaalidu woda leedahay, waxaa habboon, inaanu runtu isu sheegno, labadaa beelood, magacyadooda in badan ayaa lagu soo awr kacsadey, dalkiina waa ay burburiyeen, ee bal aan eegno kuwa kale ee dalkaani wax ka leh, magaca Soomaalinimada wadaagno.
Tani waa haddii la doonaayo inuu dalkaani hagaago, haddiise la yeeli waayo, waxaa imaandoonto, inay kuwa 55 ka sannadood la dulmaayey, oo lagu dul socdey, ayaa waxaa dhicidoonto inay kacaan, oo ayagana ay noqdaan kuwa heeb heeb isu raaca, kuna awr kacsada, maalintaasi waxay noqondoontaa, waxa maanta ay beelahaani qabsadeen, amase sameysteen, inay iyagana kala wareegaan, ayaga oo u arkaaya dheef amase dhaxal ay heleen, sida haddaba dhacday, qof gurigiisa, beertiisa, deegaankiisa, la yiraahdo, annagaa xureysanney, waxaan ka baqayaa, inay sheekadu gaadho, burrito dalkaani annagaa xureysanney, ee arrintaani ma laga fiirsadey, mise sidaani ayaa loo daayaa, ilaa ay ka gaadho, waan xureysannaye, xureysta!!!???
Taasi waxay noqodoontaa, inuu dalkaani uu u wareego dowlado, maanta shisheeye , berritose noqondoono dawladda qaranka , waa haddii arrintaani aan laga fiirsan, aysan sheekadu ahaan, reer qansax iyo xaayo.
Dalka intuu taaganyahay madaxweyne, waa annaga, raiisul wasaarena waa adinka, waxay noqoneysaa, dalkaani dadkii iska lahaa, inay usoo kacaan, kuwa sidaa moodey inay saxsantahayna ay noqdaan dad woda shisheeye ah, oo aan dalkaan waxba ku leheen, maantana saan saantu waa ay soo muuqataa, haddaan laga gaarin.
Xaaladda yaan la dhaafin Soomaalinimo, sida magacaasi uu u jiraado, codsi ma aha, ee waa farriin aan u jeedinaayo indheer garadka Soomaaliyeed, kuwaasi oo xur ka ah, caqliyadda maanta joogto, kuna fekeraayo firka soo socdo sidii ay u heli lahaayeen waddan ay xor u yihiin.